အတိတျဘဝမှာတော့ သိပျကိုဆိုးခဲ့ဖူးတယျထငျပါတယျ – Shinyoon
January 1, 2021 by Shin Yoon
ဒီဘဝမှာတော့ မယုတျမာဘူး မကောကျကဈြဘူး ဒါပမေယျ့ အတိတျဘဝတှမှောတော့ ကြှနျမ သိပျဆိုးခဲ့ဖူးတယျထငျတယျ ဒီဘဝမှာ ပွနျပွီးဆပျနရေတဲ့ဝဋျကွှေးတှကေ ငါဘယျလောကျမြားဆိုးခဲ့လို့ ဒီလောကျပွနျပေးဆပျနရေတာလဲဆိုပွီး အတိတျကို ပွနျပွေးခငျြလောကျအောငျပါပဲ ….
ကိုယျဘယျလောကျပဲ ကောငျးအောငျနနေပေါ … လူတခြို့အတှကျတော့ ကိုယျဟာအမွဲတမျးလူဆိုးကွီးပါပဲ … အဲ့ထကျဘာမှ မပိုဘူး … အနားမှာရှိနတေဲ့ကိုယျကို ကြျောပွီးမှ အဝေးဆုံးကို ရှိနတေဲ့ တခွားတဈယောကျကို လှမျးတယျ … အစစအရာရာလုပျပေးဖွဈခဲ့တဲ့ကိုယျဟာ သူတို့အတှကျ အပိုပါပဲ …
မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးလား … ကိုယျ့ဆီက လိုခငျြတာရှိမှ သတိရတဲ့သူနဲ့ ကိုယျ့ကို လိုသုံးခဏလုပျဖို့တမျးတတဲ့သူ နဲ့ အဆငျပွပေါတယျ … ကိုယျအဆငျမပွတေဲ့အခါ ဘယျလကျကိုမှ သှားမဆှဲနဲ့ ဘယျခွသေလုံးမှ သှားမဖကျနဲ့ ခေါငျးပျေါတကျနငျးသှားမယျ့လူတှခေညျြးရပျနကွေတာ ခငျသလိုလို မငျသလိုလိုနဲ့ပေါ့ …
အစဈအမှနျတှပေေးပမေယျ့လဲ ကိုယျ့ဘကျကတြော့ အတုအယောငျတှပေဲ ပွနျကတြယျ … ထပျတူညီသော တနျပွနျသကျရောကျမှုထိတော့ ဆုမတောငျးပါဘူး နဲနဲလေးတောငျ ရောငျပွနျဟပျမလာတာတော့ ဝမျးနညျးတယျ …
အခဈြရေးတဲ့ … ပိုပွီးတော့ ဆိုးတယျ… ကိုယျခဈြနလေို့ရပျနကွေတာပါ ကိုယျတငျးလိုကျရုံနဲ့ ဒီကွိုးက ပွတျသှားတော့မှာလေ .. စိတျကောကျတဲ့အခါ ကိုယျ့စိတျနဲကိုယျ ပွနျပွရေတယျ … စိတျဆိုးတဲ့အခါ ကိုယျ့မကျြရညျနဲ့ကိုယျဖွရေတယျ ကိုယျကပဲ ခဈြနရေရုံပါ.. ဝနျခံရရငျ သူက နဲနဲမှ ခဈြပုံမပျေါဘူး
သခြောတဈခုကတော့ ဒီဘဝမှာတော့ ကြှနျမ လူမှနျးသိတတျစကတညျး တခွားသူအပျေါ မယုတျမာခဲ့ဘူး … မကောကျကဈြခဲ့ဘူး ကိုယျ့ကွောငျ့ မတျောတဆ နာကငျြစခေဲ့မိတာတှတေော့ ရှိကောငျးရှိနိုငျပါတယျ ဒါပမေယျ့ နာကငျြပါစတေော့ဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြတှမေရှိခဲ့ဘူး
အတိတျဘဝမှာတော့ သိပျကိုဆိုးခဲ့ဖူးတယျထငျပါတယျ ဒီနဒေီ့ခြိနျထိ ဆပျနရေတဲ့ ဝဋျကွှေးတှကေ မကုနျနိုငျသေးဘူး …
ဒီဘ၀မှာတော့ မယုတ်မာဘူး မကောက်ကျစ်ဘူး ဒါပေမယ့် အတိတ်ဘ၀တွေမှာတော့ ကျွန်မ သိပ်ဆိုးခဲ့ဖူးတယ်ထင်တယ် ဒီဘ၀မှာ ပြန်ပြီးဆပ်နေရတဲ့ဝဋ်ကြွေးတွေက ငါဘယ်လောက်များဆိုးခဲ့လို့ ဒီလောက်ပြန်ပေးဆပ်နေရတာလဲဆိုပြီး အတိတ်ကို ပြန်ပြေးချင်လောက်အောင်ပါပဲ ….
ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင်နေနေပါ … လူတချို့အတွက်တော့ ကိုယ်ဟာအမြဲတမ်းလူဆိုးကြီးပါပဲ … အဲ့ထက်ဘာမှ မပိုဘူး … အနားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ကို ကျော်ပြီးမှ အဝေးဆုံးကို ရှိနေတဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကို လွမ်းတယ် … အစစအရာရာလုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ဟာ သူတို့အတွက် အပိုပါပဲ …
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလား … ကိုယ့်ဆီက လိုချင်တာရှိမှ သတိရတဲ့သူနဲ့ ကိုယ့်ကို လိုသုံးခဏလုပ်ဖို့တမ်းတတဲ့သူ နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် … ကိုယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဘယ်လက်ကိုမှ သွားမဆွဲနဲ့ ဘယ်ခြေသလုံးမှ သွားမဖက်နဲ့ ခေါင်းပေါ်တက်နင်းသွားမယ့်လူတွေချည်းရပ်နေကြတာ ခင်သလိုလို မင်သလိုလိုနဲ့ပေါ့ …
အစစ်အမှန်တွေပေးပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ဘက်ကျတော့ အတုအယောင်တွေပဲ ပြန်ကျတယ် … ထပ်တူညီသော တန်ပြန်သက်ရောက်မှုထိတော့ ဆုမတောင်းပါဘူး နဲနဲလေးတောင် ရောင်ပြန်ဟပ်မလာတာတော့ ၀မ်းနည်းတယ် …
အချစ်ရေးတဲ့ … ပိုပြီးတော့ ဆိုးတယ်… ကိုယ်ချစ်နေလို့ ရပ်နေကြတာပါ ကိုယ်တင်းလိုက်ရုံနဲ့ ဒီကြိုးက ပြတ်သွားတော့မှာလေ .. စိတ်ကောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ်နဲကိုယ် ပြန်ပြေရတယ် … စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ ကိုယ့်မျက်ရည်နဲ့ကိုယ်ဖြေရတယ် ကိုယ်ကပဲ ချစ်နေရရုံပါ.. ၀န်ခံရရင် သူက နဲနဲမှ ချစ်ပုံမပေါ်ဘူး
သေချာတစ်ခုကတော့ ဒီဘ၀မှာတော့ ကျွန်မ လူမှန်းသိတတ်စကတည်း တခြားသူအပေါ် မယုတ်မာခဲ့ဘူး … မကောက်ကျစ်ခဲ့ဘူး ကိုယ့်ကြောင့် မတော်တဆ နာကျင်စေခဲ့မိတာတွေတော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် နာကျင်ပါစေတော့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေမရှိခဲ့ဘူး
အတိတ်ဘ၀မှာတော့ သိပ်ကိုဆိုးခဲ့ဖူးတယ်ထင်ပါတယ် ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ ဆပ်နေရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေက မကုန်နိုင်သေးဘူး …
ခဈြဖို့ပဲသိတဲ့ နှလုံးသားဟာ သိပျကို ပူလောငျရတတျတယျ ….